ब्रीथलाइफ भिडियो लाइब्रेरी - BreatheLife2030
नेटवर्क अपडेट / जेनेभा / 2016-11-28
साँघुरो लाइब्रेरी लाइब्रेरी:
हाम्रो नवीनतम भिडियोहरू
जान्नुहोस् कि वायु प्रदूषणले हाम्रो वातावरण र स्वास्थ्यलाई हाम्रो नवीनतम भिडियोहरूमा धेरै भाषाहरूमा उपलब्ध गराउँछ।
तपाईंको वायु प्रदूषणले तपाइँको शरीरलाई कसरी प्रभाव पार्छ
हाम्रो नवीनतम भिडियोले वायु प्रदूषणले हाम्रो शरीरलाई असर गर्न सक्ने तरिका बताउँछ।
स्पेनिश, फ्रान्सेली, रूसी, चिनियाँ, अरबी, पुर्तगाली
यो भिडियोले विद्यालयबाट साधारण हिड घरमा वायु प्रदूषणको खतरासँग कसरी सजिलै बच्चाहरुलाई सामना गर्न सकिन्छ भनेर अन्वेषण गर्दछ।
स्पेनिश, फ्रान्सेली, रूसी, चिनियाँ, अरबी
स्वास्थ्य र जलवायु प्रभाव Explainer भिडियो
हाम्रो पहिलो समीक्षक भिडियो हाल हालको डब्लूएचओ डेटा प्रयोग गर्दछ स्वास्थ्य वा प्रदूषण को जलवायु प्रभावहरु लाई हाइलाइट गर्दा हाइलाइट्स को प्रदूषण गर्न को लागी धेरै प्रकार को समाधानहरु लाई प्रसारित गर्न को लागी प्रत्येक वर्ष लाखौं बचाउन को लागी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।
कुकुर भिडियो (नेपाली) सफा गर्नुहोस्
नेपालमा हरेक वर्ष, घरको वायु प्रदूषण गर्दा धूम्रपान गर्ने, पारंपरिक स्टूभ र ईंन्धनहरूमा खाना पकाउने कारणले 23,000 मानिसहरूको बारेमा मार्छ। यसमा पाँच वर्ष भन्दा कम केहि 1,400 बच्चाहरु समावेश छन्। सफा स्टोभको प्रयोगले तपाईंको स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्छ र सुरक्षित खाना, छिटो र सजिलो बनाउँदछ।
कुकस्टोभ भिडियो सफा गर्नुहोस् (नेपाली w / अंग्रेजी उपशीर्षक)
सोरजिरो: हावा सफा गर्नुहोस्
"सरेजिरो" र तिनका मित्रहरू जापानमा अल्पसंख्यक छन् र जवान छोराछोरीसँग धेरै लोकप्रिय छन्। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण नेप्पन टिभी संग काम गरे कि यिनी क्यारेक्टरहरु उत्तरी अमेरीका को लागि tweens (उमेर 8 - 12 वर्ष) को पर्यावरणीय जागरूकता को बढावा दिन को लागि एक महत्वपूर्ण नयाँ दर्शकहरु।
# समाधान गर्नुहोस्: महिलाहरूलाई सशक्त पार्नुहोस्
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस, मार्च,, २०१ 8। आजको वातावरणीय चुनौतिहरूका लागि हामी सबैको आवश्यक छ, हामी मध्ये आधा होइन। महिला र बच्चाहरू असुविधाले घरेलु वायु प्रदूषणबाट प्रभावित छन्। यस भिडियोमा हाम्रो नायिकाले उनको परिवार र सम्पूर्ण समुदायको लागि समाधानहरू फेला पार्दछ।
स्वच्छ हावा, स्वस्थ भविष्य - स्वस्थ व्यक्ति र ग्रहको लागि ब्रीथ लाइफ
वायु प्रदूषण र स्वास्थ्यको बारेमा सचेतना जगाउनको लागि एउटा संगीत भिडियो - रिकी केज र उसको विश्व संगीत एन्सेम्बलले जेनेभामा वायु प्रदूषण र स्वास्थ्य सम्बन्धी पहिलो सम्मेलनको बेला कन्सर्टबाट।
स्वस्थ व्यक्ति र ग्रहको लागि ब्रीथ लाइफ
#RickyKejLIVE: रिकी केजले प्रोटो गाउँ, भारतमा एलेक्सिस डिसूजा प्रदर्शन प्रस्तुत गर्दै
/9 .१० बच्चाहरूले प्रदुषित हावामा सास फेर्छन् र year००,००० बच्चाहरू प्रत्येक वर्ष वायु प्रदूषणका कारण मर्छन्! यो हाम्रो बच्चाहरूको गीत हो, उनीहरूको सबैभन्दा आधारभूत अधिकारको लागि हामीलाई सोध्दै, "हामीलाई जन्म दिनुहोस्!" र यो संसार उनीहरूको लागि अझ राम्रो ठाउँ बनाउन। डब्ल्यूएचओ, यूएनई, सीसीएसी र विश्व बैंक द्वारा ब्रीथ लाइफ अभियानको लागि गानको रूपमा सिर्जना गरियो।
ब्रीथलाइफ कन्सर्ट: रिकी केज लोनी पार्कको सुविधा भारतको भिजागमा लाइभ छन्
भारतको विशाखापत्तनममा 88,000 1,000,००० व्यक्तिको दर्शक, र भारतको यूबी सिटी बेंगलुरुमा १,००० व्यक्तिको लागि प्रदर्शन।
साँझबाजेलुरुरु: बंगलादेशले साँच्चिकै सहभागिता जनाएकी छिन्
बंगाल को मेयर, गंगाबाइक मलगार्जुनले घोषणा गरे कि शहर वायु प्रदूषण को कम गर्न को लागी शहर मा शामिल हो।
प्रदूषण पोडहरू - वायु प्रदूषणको अनुभव गर्दै
अन्तरक्रियात्मक कला टुक्रा, जसलाई प्रदूषण पोड भनेर चिनिन्छ, हालसालै युएन जलवायु सम्मेलनको लागि म्याड्रिड ल्याइएको थियो। पाँच छुट्टै डोमहरू मिलेर बनेको, आगन्तुकहरूले नर्वे, लन्डन, नयाँ दिल्ली, बेइजि and र साओ पाउलोमा वायु प्रदूषणको स्तर अनुभव गर्न सक्दछन्। अन्तर्क्रियात्मक अनुभव यूएनईपी ब्रेथलाइफ अभियानको एक हिस्सा हो, जुन विश्वभरिका सरकारहरूसँग जागरूकता जगाउन र वायु प्रदूषणमा कार्य गर्न कार्य गर्दछ।
ब्रेथलाइफ बैरनक्विला, कोलम्बिया
२०१ 2018 मा, ब्यारेनक्विलाले $ १००,००० मिलियन डलर "सिमेब्रा बैरनक्विला" कार्यक्रम मार्फत पाँच वर्षमा २ 250,000०,००० रूख रोप्ने योजनाको लागि शीर्षकहरू बनायो। उनीहरूले हालसम्म 100,000 34,000,००० भन्दा बढी रूखहरू रोपेका छन र यो WHO को वायु गुणस्तर दिशानिर्देशन अन्तर्गत तेस्रो अन्तरिम लक्ष्य हासिल गर्ने बृहत्तर योजनाको एक हिस्सा हो।
ब्रीथ लाइफ बेंगलुरु, भारत
बेंगलुरुको राज्य सरकारले घोषणा गरेको छ कि २०१ Bengal सम्ममा बंगलोरका सबै सरकारी गाडीहरुमा आधा इलेक्ट्रिकमा रूपान्तरण हुनेछ। यो बंगलोरुलाई भारतको इलेक्ट्रिक वाहन राजधानी बनाउन सरकारको प्रयासको हिस्सा हो, जुन तथ्यलाई जवाफ दिने सेवा हो। त्यो वायु प्रदूषण २०१ 2019 मा पहिलो पटक निर्वाचनको मुद्दाको रूपमा देखा पर्‍यो। त्यसपछि, दुई मुख्य राष्ट्रिय पार्टीहरूले आफ्ना प्रत्येक घोषणापत्रमा प्रदूषणका लागि एउटा अनुच्छेद समर्पित गरे।
ब्रेथ लाइफ मेक्सिको सिटी
२०० 2008 देखि २०१ 2016 सम्म, मेक्सिको सिटीले गैर-मोटर चालित यातायात प्रबर्धन गर्न नयाँ नीति र परियोजनाहरूको होस्ट प्रस्तुत गर्‍यो। एक बाइक सेयर प्रणाली, ECOBICI, अलग-अलग बाइक लेनहरू र विशाल बाइक हबहरू ल्यायो। आठ वर्षको अपरेशनमा, ECOBICI २ 265,000,००० भन्दा बढी दर्ता भएका प्रयोगकर्ताहरू daily 35,000,००० भन्दा बढी दैनिक यात्राको साथ एकत्रित भएको छ। शहरमा साइकल यात्रा 500 प्रतिशत बढेको छ।
ब्रीथ लाइफ पोन्तेवेद्रा
द गार्जियनका अनुसार, "व्यक्ति पोन्तेवेद्रमा चिच्याउँदैनन् - वा उनीहरू कम चिच्याउँछन्"। उनीहरूले यो पनि नोट गरे कि "कुनै रिभ्भिंग इञ्जिनहरू छन् वा हkingनिंग हार्नहरू छैनन्, कुनै मोटरसाइकलको धातुई स्नलल छैन वा मानिसहरूलाई गर्जनको आवाजले आफूलाई डाइनको माथि सुनाउँदछ"। यो किनभने पोन्तेवेद्रले १ 300,000 1999। मा मध्ययुगीन केन्द्रको सबै ,1,686००,००० वर्ग मिटर पैदल यात्रा गर्‍यो। तिनीहरूले शहर पार गर्ने कारहरू रोके र सडकको पार्कि ofबाट छुटकारा पाए, किनकि मानिसहरूले पार्क गर्ने ठाउँ खोज्दै गर्दा सबैभन्दा बढी भीड भयो। तिनीहरूले शहरको मध्यभागमा सबै सतह कार पार्कहरू बन्द गरे र १, onesXNUMX free निःशुल्क स्थानहरूको साथ भूमिगत र अन्यहरू वरिपरि खोले।
दक्षिण कोरिया एक मात्र त्यस्तो देश हो जसले सार्वजनिक र निजी भवनहरूको लागि विद्युत उत्पादन प्रणाली स्थापना गर्न अनिवार्य बनाएको छ जुन २०२० देखि निर्माण हुनेछ। सौर्य उर्जाद्वारा संचालित रोरेन हाउस कम्प्लेक्स एक सरकारी कन्सोर्टियमले निर्माण गरेको हो र देशको पहिलो "शून्य उर्जा" हो। आवास पायलट जटिल "।
घानाको युवा, बहुसांस्कृतिक राजधानी अक्रा २०१ 2018 मा ब्रीथलाइफ अभियानमा सामेल भए र २०2030० सम्ममा वायु प्रदूषणलाई सुरक्षित तहमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाए। यस प्रतिबद्धताको एक भागको रूपमा, २ लाख मानिस शहरले शहरको सबैभन्दा खराब हिटमा आउटरीचलाई समर्थन गरिरहेको छ। समुदायहरूले फोहोर जलाउने कम गर्न र हरियो अन्तरिक्ष विकासको प्रचार गर्न।